विश्वकप फुटवलः गोल्डेन बलको दाबेदार को ?
काठमाडौँ । रूसमा जारी २१ औँ संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलबाट नयाँ पावर हाउस जन्मने पक्का भइसकेको छ भने यही विश्वकपले फुटबलको क्षेत्रमा धेरै उदयमान खेलाडी जन्माएको छ । विश्वकप सुरू हुनु अघि विश्वचर्चित खेलाडी लियोनल मेस्सी, रोनाल्डो तथा नेयमारलाई गोल्डेन बलका सम्भावित दाबेदारका रुपमा हेरिएको थियो । तर मेस्सीको अर्जेन्टिना अन्तिम १६ र नेयमारको ब्राजिल […]
बेल्जियम र फ्रान्स, कस्ले फाइनलमा स्थान बनाउला ?
काठमाडाैं । रुसमा जारी विश्वकप फुटवल करिव–करिव अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतियोगितामा अन्तिम चारमा पुग्ने सबै टोली टुंगो लागेपछि अव उपाधी कस्ले चुम्ला भन्ने कौतुहलता बढाएको छ । जारी प्रतियोगीतामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अन्तिम चारमा पुगेका चार युरोपेली राष्ट्रमध्ये फाइनल प्रवेशका लागि आज दुई टोली फ्रान्स र बेल्जियम मैदानमा उत्रिदैछन् । खेल नेपाली समयअनुसार राति […]
क्रोएसिया र बेल्जियमले रच्लान् त इतिहास ?
काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलका खेलहरु करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा दुई टोली इतिहास रच्ने दाउमा देखिएका छन् । विश्वकपका कूल ६० खेलमध्ये ४ चोली उपाधि भिडन्तको होडमा रहेका छन् । यी चार टोलीमध्ये फ्रान्स र इंग्ल्याण्ड एक–एक पटक उपाधि उचालिसकेका मुलुक हुन् भने अन्य दुई टोली क्रोएसिया, बेल्जियम उपाधि उचाल्दै इतिहास रच्ने दाउमा […]
उपाधि हाेडमा ४ टाेली- फ्रान्स, बेल्जियम, क्रोएसिया र इंग्ल्यान्ड
विश्वकपको सेमिफाइनल समिकरण पूरा काठमाडौं . २०१८ फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समिकरण पूरा भएको छ। शनिबार राति अन्तिम क्वार्टरफाइनलमा क्रोएसिया विजयी भएसँगै सेमिफाइनल समिकरण पूरा भएको हो। क्रोएसियाले आयोजक रसियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–३ गोलले पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको हो। त्यसअघि इंग्ल्यान्डले स्विडेनलाई २–० गोलले पराजित गरेर सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। यस्तै […]
क्वाटरफाईनल अन्तर्गत आज स्वीडेन र ईङ्ल्याड तथा रुस र क्रोएसिया भिड्दै
काठमाडौं । जारी विश्वकपमा गएरातीवाट सुरु भएको क्वाटरफाईनल खेल रोमाञ्चक मोडमा पुगेका छन् । गएराति भएको क्वाटरफाईनलका खेलवाट फ्रान्स र बेल्जियमले सेमिफाइनका लागि स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन् फुटबलको महारथी राष्ट्र ब्राजील र उरुग्वेको यात्रा क्वाटरफाईनलमै टुंगिएको छ । यस्तैमा आजपनि क्वाटरफाईन अन्र्तगतका दुई खेल हुदैछन् । पहिलो खेलमा नेपाली समय अनुसार राति पौनै ८ बजे […]
शनिबार, असार २३, २०७५
तेस्रो प्रधानमन्त्री कप विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगीता काठमाडौमा सुरु
काठमाडौँ । तेस्रो प्रधानमन्त्री कप विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगीता आज देखि काठमाडौमा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको परिषदका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले उद्घाटन गर्नुभयो । प्रतियोगितामा पुरुष/महिला भलिबल, ब्याडमिन्टन र टेबलटेनिस तथा बुद्धिचाल (खुला) गरी ४ विधामा प्रतिस्पर्धा हुने परिषद अन्तर्गत खेलकुद प्रतियोगिता तथा योजना विभागले जनाएको छ । भलिबलमा २, […]
उपाधिको होडमा ८ टोली, ब्राजिललाई रोक्ला त बेल्जियमले ?
काठमाडौं । रूसमा जारी विश्वकप फुटबल अन्र्तगत सहभागी ३२ राष्ट्रमध्ये १६ हुँदै ८ टोलीको छनोट भएका छ । समूह चरणबाट १६ टोली बाहिरिए भने प्रिक्वार्टर फाइनलमा ८ टोली आ–आफ्नो खेलमा पराजय व्यहोर्दै घर फर्किए । जित हासिल गरका ८ टोलीको भिडन्त भने शुक्रबारबाट शुरु हुनेछ । मंगलबार राति भएको खेलमा स्वीडेन र इंग्ल्याण्डले आ–आफ्ना खेलमा […]
काठमाडौं । रूसमा जारी विश्वकप फुटबल अन्र्तगत प्रि–क्वाटरफाईनलका खेलको समाप्तिसँगै अन्तिम ८ मा पुग्ने टोलीको टुंगो लागेको छ । मंगलबार राति भएको खेलमा स्वीडेन र ईङ्ल्याण्डले आ–आफ्ना खेलमा जित हात पार्दै अघिल्ले चरणमा प्रवेश गरेसँगै क्वार्टरफाइनलमा पुग्ने ८ टोलीको टुंगो लागेको हो । यसअघि उरुग्वे, फ्रान्स, ब्राजिल, बेल्जियम, रसिया र क्रोएसियाले अन्तिम ८ को स्थान […]